Male – Page 8 – Healthy Life Journal
အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားတို့ စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်စေမည့် နည်းခြောက်သွယ်
၊ ကိုထက် ၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အမျိုးသားစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တက်စေဖို့ရာအတွက် ကျန်းမာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ရပါမယ်။ ချစ်စိတ်ကို နိုးကြွစေပြီး စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်စေမယ့် နည်းတွေကို သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတွေက ဖော်ပြထားပါတယ်။ (၁) ပြီးပြည့်စုံသော အိမ်ထောင်မှုဘဝက ကောင်းမွန်သည့် အာဟာရပေါ်တွင် မူတည်နေ အာရုံကြောလုပ်ငန်းဆောင်တာ...
အမျိုးသားတို့ လုပ်လေ့ရှိသည့် ရေချိုးနည်း အမှားများ
၊ ကိုမိုး ၊ ရေချိုးတယ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်အညစ်အကြေးတွေကို ကင်းစင်စေရုံသာမက စိတ်ကိုပါလန်းဆန်း ပေါ့ပါးသွားစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေချိုးတာကြောင့် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးမရစေဖို့ ရေချိုးနည်း အမှားတွေကို ရှောင်ကြဉ်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ (၁) သပွတ်အူ သို့မဟုတ် ရေမြှုပ်ကို အသစ်မလဲဘဲ အသုံးပြုခြင်း...
အမျိုးသား သွေးဆုံးခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ
၊ ဦးမိုး ၊ အမျိုးသမီးတွေ အသက်ကြီးလာချိန်မှာ သွေးဆုံးသွားသလိုပဲ အမျိုးသားတွေကလည်း အသက်ကြီးလာ လေလေ၊ ကျားဟော်မုန်း တက်စတိုစတီရုန်းထုတ်လုပ်မှု လျော့နည်းလာလေလေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေကို အမျိုးသားသွေးဆုံးခြင်း (Andropause)လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ – အမျိုးသား သွေးဆုံးခြင်းဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်း ကျားဟော်မုန်းကို...
အမျိုးသားတို့ သင်္ကြန်ပွဲနွှဲပျော်ပြီးချိန် ဖြစ်တတ်တဲ့ဝေဒနာတွေကို ဘယ်လိုလျှော့ချသင့်သလဲ . . .
၊ ကိုမိုး ၊ သင်္ကြန်ပွဲမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ သင်္ကြန်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ အသားအရေနေလောင်တာ၊ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်တာ အစရှိတဲ့ဝေဒနာတွေ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီဝေဒနာတွေကင်းစင်စေဖို့ အမျိုးသားတွေလိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ (၁) ကြေးချွတ်ပြီး ရေချိုးပါ သင်္ကြန်ကာလနွှဲပျော်ပြီးချိန်မှာ အရေပြားက...
အမျိုးသားတွေ ဖွင့်ဟပြောလိုစိတ်မရှိတဲ့ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါအတွက် အဖြေရှာ
၊ ကိုထက် ၊ အမျိုးသားအများစုဟာ ဘဝမှာတစ်ကြိမ်မဟုတ်တစ်ကြိမ်ဆိုသလို ပန်းသေပန်းညှိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ရင် စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အတွက် ယောကျာ်းပီသမှုလျော့နည်းတယ်လို့ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ စတာတွေကြောင့် ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်တတ်သလို စီးကရက်သောက်တာ၊ အရက်အလွန်အမင်းသောက်တာ၊ တချို့ဆေးဝါးတွေကို မှီဝဲတာ စတာတွေကြောင့်လည်း ပန်းသေပန်းညှိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။...
၊ ကိုထက် ၊ – မကြာခဏသုက်လွှတ်ခြင်းဖြင့် ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းလျော့ကျစေနိုင် အမျိုးသားတွေမှာ မကြာခဏသုက်လွှတ်တာကြောင့် ကင်ဆာကို တွန်းလှန်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ အမေရိကန် ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ နှစ်စဉ်အစည်းအဝေးအရ ဒီနှစ်တင်သွင်းခဲ့တဲ့စာတမ်းမှာ တစ်လမှာ ၂၁ ကြိမ်ခန့် သုက်လွှတ်တဲ့အမျိုးသားတွေဟာ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအန္တရာယ် ၂၀...
မကွေးဆေးရုံကြီး၌ ရှားပါသော အူအတက်ပါသည့် အူကျခြင်း(Amyand’s hernia)အား ခွဲစိတ်ကုသခဲ့
ပါမောက္ခဦးအေးမွန် ခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. Amyand’s hernia ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. အူကျတဲ့အထဲမှာ အူအတက် (Appendix) ပါသွားတာကို Amyand’s hernia လို့ ခေါ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ပေါင်ခြံအူကျတာ...
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ စစ်ဆေးသင့်သော အကြောင်းရင်း ရှစ်ရပ်
၊ ကိုမိုး ၊ အသက် ၄၀ နဲ့ အထက်အရွယ်အနေနဲ့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကို ပုံမှန်စစ်ဆေးဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ရောဂါကို စောစောရှာဖွေတာက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ (၂) ဘဝတစ်လျှောက် အမျိုးသားခြောက်ဦးအနက် တစ်ဦးဟာ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ (၃)...
အမျိုးသားတို့ သတိပြုဖွယ်ရာ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မေး. အမျိုးသားတွေမှာ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါက ဘာကြောင့် ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. ဆစ်ဖလစ်ရောဂါက လိင်ဆက်ဆံရာက ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ပိုးရှိသူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရာက ဘက်တီးရီးယားပိုးဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်ရောက်ပြီး ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ မေး....
အမျိုးသားအင်္ဂါ ကြီးမားလိုသူတို့အတွက် သဘာဝနည်းလမ်းများ
၊ ကိုထက် ၊ အမျိုးသားအင်္ဂါ (Penis) ကြီးမားလိုသူတချို့ဟာ ကိုယ့်ဘာသာ လိင်တံထဲဆေးထိုးတာ၊ ဆေးလိမ်းတာ စသဖြင့် နည်းလမ်းမမှန်ဘဲ လုပ်ဆောင်ရင်း အနာတွေဖြစ်တာ၊ ရောင်ရမ်းတာ၊ နောက်ဆုံးဖြတ်ပစ်ရတာ . . စတဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ ကြီးကြီးမားမား ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ကြားသိရပါတယ်။...